‘नेपाल-भारतबिचको सम्बन्ध थप प्रगाढ पार्नका निम्ति मोदीको यो भ्रमण ऐतिहासिक’ : नेता झा - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘नेपाल-भारतबिचको सम्बन्ध थप प्रगाढ पार्नका निम्ति मोदीको यो भ्रमण ऐतिहासिक’ : नेता झा
Posted by Milap Subedi | २७ बैशाख २०७५, बिहीबार १६:०८ |
नेपाल–भारतको उच्च स्तरको भ्रमण निरन्तर भईरहेको छ । चैत्रको पहिलो साता भारत भ्रमण गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा फेरी भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणको लागि भोली आउदै छन । उनलाई राजकिय सम्मान दिँदैछ । मोदीको यो भ्रमण यसअघिको भन्दा केही फरक छ । उनले नेपाल भ्रमणको प्रवेशद्धार जनकपुरलाई बनाउदैछन । यो भ्रमणको महत्व यसरी पनि छ की मोदीले नेपाल भारतको हितमा रहने केही महत्वपुर्ण आयोजनाहरुमा सम्झौता गर्नेछन । उनलाई जनकपुर र काठमाडौँमा नागरिक अभिनन्दन गरिने बताउदै गर्दा केही विरोधका स्वरहरु पनि सुनिदैछ । यसै सन्दर्भमा रहेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सहमहामन्त्री सुरेन्द्र कुमार झासँग हेडलाईन नेपालका लागि पत्रकार परिवर्तन देवकोटाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
भोली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदैहुनुहुन्छ, र जनकपुरबाट भ्रमणको सुरुवात गर्दैहुनुहुन्छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
यो एकदमै ऐतिहासिक र हामी नेपाली गौरवान्वित हुने भ्रमण हो । विश्वकै सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुकको नेता तथा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । अझै भन्नुपर्दा प्रत्यक्ष रुपमा उहाँ सिधै जनकपुर आउनुहुन्छ । संघीयतामा हाम्रो मुलुक गएको छ । संघीयतामा विश्वका जुनसुकै देशका मुलुक आफुलाई मन लागेको प्रदेशमा जान सक्नुहुने कुरा हो । त्यस्तै हाम्रो छिमेकी मुलुकको सोच सकारात्मक छ भन्ने पनि हो । साथसाथै जनकपुर भारतसँग जोडिएको र उहाँलहरुको पनि सामुहिक महत्व बोकेको छ । नेपाल तथा भारतका जनतासँग मिथिला र जनकपुरको पौराणीक सम्बन्ध भएको नाताले उहाँ प्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँ आउन खोज्नुभएको हो । जनकपुराई रामायण सर्किटमा जोड्ने कुरा थियो, त्यसैले खास उहाँ रोडवेबाट आउन खोज्नुभएको थियो, तर सम्भव नभएकाले उहाँ हेलिकप्टरबाट आउँदैहुनुहुन्छ । यो एकदमै राम्रो विषय हो ।
उहाँले भ्रमणको सुरुवात अरु प्रदेशबाट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर प्रदेश २ को जनकपुरधामबाटै गर्न लाग्नुभयो, यसको रहस्य के हो ?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो पूर्णतः धार्मिक भ्रमण हो । धार्मिक स्थललको हिसाबले पहिल्यै देखि जनकपुर आउने उहाँको चाहना थियो । त्यस्तै हिन्दुत्व र हिन्दु धर्मको एक अनुयायी भएको हुनाले उहाँले जानकी माता, जनक जस्ता हस्तीहरुको सुप्रसिद्ध भूमि जनकपुर भएको हुनाले जनकपुर नै रोज्नुभयो । तर उहाँ प्रदेश २ मा मात्रै सिमित हुनुहुन्न । उहाँ मुक्तिनाथ पनि जाँदैहुनुहुन्छ ।
उहाँले आफ्नो नेपाल भ्रमणको शुरुवात जनकपुरबाट गर्नुहुने कुरालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् नी ?
यो हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो आन्तरिक विवादहरु बढाउने, उत्तेजक टिप्पणी, आपत्तिजनक कुराहरु गर्ने समय होईन । यो भ्रमण कुनै मधेशवादी दलको निमण्त्रणमा भएको होईन , मुलुकको केन्द्रिय सरकार अर्थात केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निमन्त्रणामा आउन लाग्नुभएको हो । यस्तो अवस्थामा पाहुनालाई बोलाउने, शक्तिशाली नेतालाई बोलाउने अनि अनर्गल प्रचार गर्ने रु यदि यस्तो अवस्थामा विवाद सिर्जना गर्न थाल्ने हो भने हामीले पनि एकको पक्ष लिनुपर्ने हुन्छ, यदि यसो हुँदा भोलि देशमा द्वन्दतिर गयो भने भने के गर्ने ? त्यसकारण यो विवाद गर्न उपयुक्त समय होईन ।
मोदीको एउटै कार्यकालमा यो तेस्रो पटकको नेपाल भ्रमण हो, यसले के सन्देश दिन्छ ? भ्रमणले विशिष्ट सम्बन्ध स्थापना गर्ला ?
नेपालीहरुको मनोविज्ञान कस्तो छ– विगतमा हामीले सधैं हाम्रो प्रधानमन्त्री सधैं बाहिर जाने उताबाट कोही नआउने भनेर हिनताबोध गरियो, अहिले आउन थालेपछि चाहिं किन धेरै आयो भनेर सोच्न थाल्ने, यो कस्तो बानी ? हाम्रोे देशमा जुनसुकै विदेशी पाहुनाहरु आउँदा पनि नेपाललाई माया गरेर केही दिन भनेर आएको छ भने यसमा सकारात्मक हुनुपर्यो नि । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा यसको लाभ कसरी हात पार्ने, जनताको समून्नती तथा उत्थानको लागि फाईदा लिनुपर्यो नि । यो भ्रमण आफैमा विशिष्ट भ्रमणका रुपमा लिनुपर्छ । किनभने यो राजैतिक भन्दा पनि धार्मिक रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको व्यक्तिगत भ्रमण हो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध पुरानो हैन केवल २५० वर्षको हो तर मधेश र भारतको महत्व हजारौं वर्ष पुरानो सम्बन्ध हो । यसकारण नेपाल-भारत विचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएर आउँछ ।
अन्त्यमा, मोदीको यो भ्रमणलाई लिएर विरोध जनाउनेहरुप्रति तपाईको धारणा के छ ?
भ्रमणको विरोध शीर्ष ५ दलले गरेको छैन । यो भ्रमणप्रति टिकाटिप्पणी गर्ने अबुझ साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने, त्यतातिर नजानुहोस् । तपाईं-हामी सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । नत्र भोलि गएर हाम्रै नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशमा जाँदा उहाँहरुको पनि सम्मानमा ठेस पुग्नसक्छ ।
Previousभारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको हेलिकोप्टर जोमसोममा, जानकी मन्दिर नियन्त्रण गरी सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई
Nextभारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ट्विट : ‘द्वीपक्षीय सहयोगलाई अझ व्यापक बनाउन ओलीसँग विस्तृत कुराकानी गर्छु’
‘काग्रेस र एमाले संगै सरकारमा बस्न सक्दैन’ नेता रिजाल
२६ असार २०७३, आईतवार २०:२४
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्दै
२३ मंसिर २०७५, आईतवार १०:१९
फागुन ६ देखि कोहलपुर महोत्सव, डेढ लाख बढीले अवलोकन गर्ने दाबी
१० माघ २०७३, सोमबार १६:०९
आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीको ‘तालिबानी’ शैली, पोलियो अभियान रोक्ने प्रयास
२१ फाल्गुन २०७३, शनिबार ०८:११